ရှေးမြန်မာ..: ပဲခူး ရွှေဂူကြီးဘုရား
ရာသီဥတုဒါဏ်ကြောင့် ပျက်စီးလာပြီ ဖြစ်တဲ့ ကျောက်စာ
မုတ် (မုဒ် ) ဆောက်လုပ်ရာမှာ ထုထူထူ ကျောက်ပြားသုံးတယ်
အနောက်ဘက်မုတ်က ကြည့်မှသာ ဒီလိုမြင်ရတယ်
ရှေ့တည့်တည့်မှာ ဆောက်ထားတဲ့ အဆောက်အုံကြောင့် ကွယ်နေတယ်
Posted by ရှေးမြန်မာ at 12/11/2010
မိုးယံ December 11, 2010
နှမြောစရာကောင်းတာက ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု နည်းတယ်နော်..
Crystal December 15, 2010
ပဲခူးသူမို့ စာလာဖတ်ပါတယ်ရှင်။ မှတ်တမ်းများ ဖတ်ခွင့်ရလို့ ကျေးဇူးပါနော်။
အမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အခြေအနေတွေကို သက်သေနဲ့တကွ လက်လှမ်းမှီသမျှ ဖော်ထုတ်စောင့်ရှောက်နေတဲ့ အတွက် သမိုင်းအတွက် အဖိုးတန်တဲ့မှတ်တမ်းတွေ ဖြစ်သလို မြန်မာနိုင်ငံကြီးအတွက်
တစ်ထောင့်တစ်နေရာက အကျိုးပြု ဆောင်ရွက်နေတဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို ရင်ထဲက မြတ်မြတ်နိုးနိုးလေးစားပါတယ်ခင်ဗျာ.
ဒီထက်မက တိမ်မြုပ်နေတဲ့၊ ပျက်စီး ပျောက်ကွယ်လုနီး ဖြစ်နေတဲ့ မြန်မာ့သမိုင်း အဖိုးတန် အဆောက်ဦး၊ရှေးဟောင်းလက်ရာ အမွေအနှစ်တွေကို
ရှာဖွေ ဖော်ထုတ်နိုင်အောင် ဆန္ဒပြုပါတယ်။